Thet Htoo's: အပါယ်တံခါး ပိတ်ကြရအောင် - သုဝေ (ဘူမိဗေဒ)
အပါယ်တံခါး ပိတ်ကြရအောင် - သုဝေ (ဘူမိဗေဒ)
စာရေးသူသည် အစိုးရဌာနကြီးတစ်ခုတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်မျှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူထားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
အငြိမ်းစားယူလိုက်သည့် အချိန်မှာပင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ဇနီး သား သမီးလေးများနှင့် တကွဲတပြားစီ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှ ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းရှိ အိမ်လေးတစ်လုံးတွင် တစ်ယောက်တည်းနေပြီး ဖြစ်သလို ချက်ပြုတ် စားသောက်နေခဲ့ရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အိမ်လေးတစ်လုံးထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်ဆန် နေနေရသောအခါ ယခင်က မိသားစုများနှင့် အတူတကွ စုစုဝေးဝေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့ရသည့် ဘ၀ကို ပြန်လည် တမ်းတနေခဲ့ပြီး များစွာ ပူဆွေးသောက ရောက်နေခဲ့ရပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် သားသမီးလေးများ နေထိုင်လျက်ရှိသော ရပ်ကွက်သို့ နေ့စဉ်လိုလို နေပူမိုးရွာမရှောင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး သူတို့လေးတွေနှင့် တွေ့ဆုံနေခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် သားသမီးလေးများကို ငွေကြေးအားဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် မပံ့ပိုးနိုင်သော်လည်း သူတို့၏ နေရေး ထိုင်ရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းကာ အားပေးနှစ်သိမ့်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ နေခဲ့ရာမှ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးသော သားက အလုပ်အကိုင် ရရှိသွားပြီး စာရေးသူကို ထောက်ပံ့လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရောက်ရှိသွားသော သမီးကလည်း အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေလာပြီး စာရေးသူကို လစဉ်ပုံမှန် ထောက်ပံ့လာနိုင်ခဲ့ပြန်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေလာသောအခါ ၀န်ထမ်းဘ၀က အပေါင်းအသင်းများနှင့် သောက်သုံးခဲ့သော အရက်ကို ညဥ့်အခါ အိပ်မပျော်သည်ကို အကြောင်းပြပြီး ပြန်လည် သောက်သုံးနေမိပြန်ပါသည်။
အရက်ကို အလွန်အကျွံ သောက်သုံးနေခဲ့မိသဖြင့် စာရေးသူ၏ ဘ၀တွင် အမှားပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့မိသည်ကို နောင်တ မရနိုင်သေးဘဲ နေ့စဉ်လိုလို အရက်လေး တမြမြနှင့် ဖြစ်နေခဲ့ရာမှ တစ်နေ့တွင် အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ၇ ရက် တရားစခန်းတစ်ခုကို သူနှင့်အတူ လိုက်ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်လာပါသည်။
စာရေးသူလည်း မိတ်ဆွေနှင့်အတူ မဆိုင်းမတွ လိုက်သွားခဲ့ပါသည်။ အရိပ်အာဝါသ ကောင်းမွန်လှပြီး ကျယ်ဝန်းသော ဓမ္မရိပ်သာဝင်းကြီးအတွင်းသို့ ၀င်သွားမိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စာရေးသူ၏ ရင်ထဲတွင် များစွာ အေးချမ်း ကြည်နူးသွားရပါသည်။
အဆိုပါ တရားရိပ်သာကြီးတွင် ၇ ရက်လုံးလုံး ၀ိပဿနာဘာဝနာများ ပွားများအားထုတ်ရခြင်း၊ ကမ္မဌာနစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၏ နေ့စဉ်ပို့ချသော တရားဒေသနာတော်များကို နာကြားရခြင်းတို့ကြောင့် စာရေးသူ၏ ဆောက်တည်ရာမရ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်နေခဲ့သော စိတ်အစဉ်သည် များစွာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပါတော့သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် အဆိုပါ တရားရိပ်သာကြီးမှ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ၀ိပဿနာဘာဝနာနှင့် ပတ်သက်သော စာပေကျမ်းဂန်များကို လက်လှမ်းမှီသမျှ လိုက်လံ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး လေ့လာမှတ်သားနေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်းစာများတွင် တွေ့ရသော ၇ ရက်တရားစခန်းများသို့လည်း အလျဉ်းသင့်သလို သွားရောက် အားထုတ်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ၇ ရက်တရားစခန်းများကို ၄ - ၅ - ၁၀ ကြိမ်ခန့် ၀င်ရောက် အားထုတ်ပြီးနောက် စာရေးသူ၏ ရင်ထဲမှ သောက အပူမီးတို့သည် များစွာ အေးငြိမ်းသွားပါသည်။
စာရေးသူအတွက် အထူးခြားဆုံး ဖြစ်ရပ်မှာ မည်သူမျှ ပိတ်ပင်တားမြစ်မရခဲ့သော အရက်သေစာ သောက်သုံးနေသော အကျင့်ဆိုးသည် အလိုလို ပြတ်တောက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထို့အပြင် မိမိတို့ ပင်ပန်းကြီးစွာ အားထုတ်ရှာဖွေထားသော လစာငွေထဲမှ ဦးဦးဖျားဖျား ဖခင်ကြီးဖြစ်သူ စာရေးသူအား ထောက်ပံ့နေကြသော သားနှင့်သမီးတို့၏ ကျေးဇူးကို ပြန်လည် တုံ့ပြန်သော အနေဖြင့် စာရေးသူ၏ ကျန်ရှိနေသေးသော ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး တရားဘာဝနာကိုသာ ကြိုးစား အားထုတ်သွားပါတော့မည်ဟု သန္နိဌာန် ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခင်က ဤအိမ်လေးတွင် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်ဆန် နေခဲ့ရသဖြင့် စိတ်အားငယ် နေမိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သည်အိမ်လေးတွင် တစ်ယောက်တည်း နေနေရသည့် အဖြစ်ကိုပင် လွန်စွာ နှစ်ခြိုက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဤအိမ်လေးကို ကျောင်းကန်ဇရပ်အသွင် သဘောထားပြီး တရားဘာဝနာများကို စာတွေ လက်တွေ့ ပွားများ အားထုတ်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ နေခဲ့ရမှ တစ်နေ့တွင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ၇ ရက် တရားစခန်းတစ်ခုကို ညွှန်လာပြန်ပါသည်။ စာရေးသူလည်း မိတ်ဆွေ ညွှန်လာသည့် တရားစခန်းသို့ ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်။ ထို တရားစခန်းမှာ အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီး ၀ိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်က သန်လျင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော တရားစခန်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ၇ ရက်တရားစခန်းတွင် နေ့စဉ် နံနက် ၄း၃၀ နာရီမှ ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိ တစ်နေ့ ၁၁ ကြိမ် တရားရှုမှတ်ရပါသည်။ တရားစခန်း အတွေ့အကြုံ အတော်အသင့် ရှိခဲ့ပြီးသူ စာရေးသူပင် ပထမတစ်ရက်နှစ်ရက်တွင် အတော် ကြိုးစားအားထုတ်ရပါသည်။
စာရေသူတို့သည် ၄ ရက်ခွဲတိတိ မိမိတို့၏ နှာသီးဝတွင်သာ အာရုံပြုပြီး ၀င်လေထွက်လေကို ရှုမှတ်နေခဲ့ရပါသည်။ သမာဓိမှကင်း၍ ၀ိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဟု အဆိုရှိသည်နှင့်အညီ စာရေးသူတို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ နည်းအတိုင်း သမထဘာဝနာကို ပွားများအားထုတ်ပြီး သမာဓိ စွမ်းအားကို ထူထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ယောဂီများ ကမ္မဌာန်းဘာဝနာ ပွားများနေချိန်တွင် ကမ္မဌာန်းနည်းပြဆရာ၊ ဆရာမများက အနီးကပ်ညွန်ကြား ပြသပေးနေကြပါသည်။ တရားစခန်းကြီး၏ ၅ ရက်မြောက်သောနေ့တွင်မူ သမထ ဘာဝနာသို့ ကူးပြောင်းရှုမှတ် အားထုတ်စေပါသည်။ ပထမ ၄ ရက်လုံးလုံးယောဂီတို့၏ နှာသီးဝတွင် ၀င်လေထွက်လေကို အနုစိပ် ရှုမှတ်ပွားနေရာမှ ယောဂီတို့၏ ဦးခေါင်း ငယ်ထိပ်နေရာသို့ အာရုံကူးပြောင်း ရှုမှတ်ရပါသည်။
စာရေးသူလည်း စာရေးသူ၏ နှာသီးဝနေရာမှ ဦးခေါင်း ငယ်ထိပ်နေရာသို့ အာရုံကူးပြောင်း ရှုမှတ်လိုက်ရာ စာရေးသူ၏ ဦးခေါင်း ငယ်ထိပ်နေရာတွင် လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ် မွမွရွရွ ဖြစ်နေရုံမျှမက ဦးခေါင်းငယ်ထိပ်အတွင်းသို့ တစ်စုံတစ်ရာနှင့် ထိုးသွင်း ဖိနှိပ်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်ကို ရှုမြင်ခံစားနေရပါသည်။
ထို့နောက် ယောဂီတို့၏ ဦးခေါင်းငယ်ထိပ်နေရာမှ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ခြေဖျား လက်ဖျားမကျန် ဖြန့်ကျက်ပြီး ရှုမှတ်ရာတွင်လည်း စာရေးသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လှုပ်မှု၊ ရွမှု၊ ပူမှု၊ အေးမှု၊ တောင့်တင်းမှုတို့ကို ခံစားနေရပြန်ပါသည်။
ယခင်က တည်ငြိမ်ခိုင်မြဲနေသည်ဟု ထင်ရသော ယောဂီတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည် အမှန်စင်စစ် ခဏမစဲ တသဲသဲ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေသည်ကို ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင် ခန္ဓာဥာဏ်ရောက် ရှုမြင်နေကြရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ ရှုမြင်နိုင်ကြခြင်းမှာလည်း ယောဂီတို့ ၄ ရက်လုံးလုံး ကြိုးစားအားထုတ် ထူထောင်ထားခဲ့သော သမာဓိစွမ်းအားကြောင့်ပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ခဏမစဲ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေမှုတို့မှာ အနိစ္စလက္ခဏာ၊ ထိုဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲနေမှုတို့ကြောင့် မခံသာသည့် ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ ဒုက္ခလက္ခဏာ၊ ထိုမခံသာသည့် ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို တားဆီး၍မရ အစိုးမရသည့် သဘောမှာ အနတ္တလက္ခဏာပင် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္မဌာနာစရိယ ဆရာကြီးများက အကျယ်တ၀င့် ဟောပြောပြပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် ငါ-သူတစ်ပါး-ယောင်္ကျား-မိန်းမ-လူ-နတ်-ဗြဟ္မာ-တောတောင်ရေမြေ ဟူ၍ မရှိပြီ။ အခါမစဲ တသဲသဲ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲနေသော ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားသာရှိပုံ၊ ထိုရုပ်တရား နာမ်တရားတို့သည် ခြေကျိုးသူနှင့် မျက်စိမမြင်သည့် လူနှစ်ယောက် အတူတကွ ခရီးသွားသလို အချင်းချင်း ထောက်ပံ့ အကျိုးပြုနေကြပုံ ပမာအလား ရုပ်တရား နာမ်တရားတို့ကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း၊ သံသရာ တစ်လျှောက်လုံး အရိုးစွဲခံယူခဲ့သော ငါ-သူတစ်ပါး ဟူသော သက္ကာယဒိဌိကို ခွာနိုင်ခြင်းတို့အပြင် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဟူသော လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို သူပြော-ငါပြောမဟုတ်၊ ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင် ရှုပွားဆင်ခြင် သိမြင်နေကြရပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထို့အပြင် ယောဂီတို့သည် ၇ ရက်လုံးလုံး သီလကို ဆောက်တည်ထားခြင်း၊ မိမိတို့ အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့ကို ခေတ္တယာယီ စွန့်ခွာပြီး ယခုလို ဆိတ်ငြိမ်သည့် ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်းတွင် လာရောက်ပြီး တရားဘာဝနာများ အားထုတ်နေကြသဖြင့် ပါရမီ ဆယ်ပါးကို တစချိန်တည်း ဖြည့်ဆည်းနေကြသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါ၍ ယခုအချိန်အခါတွင် ယောဂီတို့သည် သာမာန် ပုထုဇဉ်များ မဟုတ်ကြတော့ပဲ အရိယာနွယ်ဝင် သူတော်စင်များ ဖြစ်နေကြပါပြီ။
ဆက်လက်၍ ကြိုးစားအားထုတ်သွားပါက ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားတို့၏ ဖြစ်မှု၊ ပျက်မှုတို့ကို ရှုမြင်လာနိုင်ကြပြီး မဟာ သောတာပန်အဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်ရုံမက အပါယ်လေးဘုံသို့ မကျရောက်နိုင်တော့ဘဲ ယခုဘ၀အတွင်းမှာပင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြကြောင်းကို ရဲရဲကြီး အာမ ခံဝံ့ပါသည်ဟု ကမ္မဌာနာစရိယ ဆရာကြီးများက မိန့်ကြားပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆရာကြီးများက မိန့်ကြားလိုက်သည့်အခါ အခြားသော ယောဂီများ မည်ကဲ့သို့ ခံစားနေကြရမည်ကို မသိနိုင်သော်လည်း အသက် ၆၀ ကျော် အရွယ်အထိ စိတ်အလိုလိုက် မိုက်မှားနေခဲ့သော စာရေးသူလို ပုဂ္ဂိုလ်က သာမန်ပုထုဇဉ်ဘ၀မှ အရိယာနွယ်ဝင် သူတော်စင်ဘ၀သို့ ခေတ္တယာယီပင် ဖြစ်စေကာမူ ရောက်ရှိနေပြီဟု ကြားသိရသောအခါ ၀မ်းသာကြည်နူးမှု ဖြစ်ရလွန်း၍ မျက်ရည်များပင် စီးကျလာခဲ့မိပါသည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ၊ အိမ်လေးတစ်လုံးတွင် တစ်ယောက်တည်း နေရသဖြင့် စိတ်အားငယ်နေရန်မလို၊ မိမိတွင် အမွန်မြတ်ဆုံး အလုပ်ဖြစ်သည့် တရားဘာဝနာ ပွားများ အားထုတ်သည့် အလုပ်ရှိနေပါပြီဟူသော အတွေး ၀င်နေမိသည်။
အဆိုပါ တရားစခန်းကြီးက စီစဉ်ပေးသည် ဘတ်စ်ကားဖြင့် အပြန်လမ်းတွင် သန်လျင်တံတားကြီးပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီး တိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးလေးကို တစ်ဝကြီး ရှုရှိုက်လိုက်မိပြီးနောက် စာရေးသူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေပါတော့သတည်း။
မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်၊ အတွဲ-၂၃၊ အမှတ်-၅၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ
ရေးသူ = Thet Htoo@Myat Lone | ရေးသားချိန် = 3:14:00 AM
| ကဏ္ဍ = Dhamma
why am i still blogging ?
EzyPage Basic Edition
ဒါဘယ်သူလဲ ? - Part 2
3 Column Header
Hacker Puzzle !
ကိုယ့်ကို ကိုယ် ရည်းစားစကားပြောခြင်း